Desktọpụ Ntụgharị vesos Online MP4 Ntụgharị
> Resource> Video> Desktọpụ vs Online MP4 Ntụgharị
Ị mgbe niile malitere iji ihe na online Ntụgharị n'ihi na gị MP4 faịlụ? Dịtụwo mgbe ị gbalịrị converting gị MP4 faịlụ site na iji a desktọọpụ Ntụgharị? Ị maara ọdịiche dị n'etiti abụọ akakabarede ụzọ? Ikekwe, m nwere ike inyere aka site na-enye gị a obere ihe ịghọta n'ime onye ọ bụla n'ime ụzọ; Method 1: Site online MP4 Ntụgharị ma ọ bụ; Method 2: Desktọpụ Ntụgharị.
Usoro 1: Online MP4 Ntụgharị
Lelee free online video Ntụgharị n'okpuru maka nkọwa ndị ọzọ si na unu nwere ike na-abịa gafee ebe converting gị MP4 faịlụ. Ịnwere ike ịchọgharị na bulite gị faịlụ site Obodo nchekwa. Ọ atọghata videos ka fọrọ nke nta ọ bụla usoro.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ndị ọzọ online video converters, dị nnọọ ego ebe a, Ndepụta nke Online Video converters
Otú ọ dị, i nwere ike na tọghata ONE faịlụ na oge. Na n'elu nke, akakabarede oge ga-iche iche dabere gị njikọ Ịntanetị e wezụga ndị ọzọ so akpata ụdị faịlụ size, nhazi ọsọ nke PC na wdg
Ike gwụrụ nke converting gị MP4 faịlụ otu otu ma ọ bụ inwe-echere afọ ruru ka Internet njikọ? Ọ bụ oge gị na-ịgbanwee n'elu ka a na desktọọpụ Ntụgharị! Karịsịa mgbe ị na-enwe ihe karịrị ole na ole faịlụ iji tọghata na eleghị anya ị ga-achọ na ị pụrụ ime ihe na ya.
Ọ bụghị ihe niile online converters ekwe ka ị dezie gị faịlụ n'ihu akakabarede; N'ihi ya na nke ahụ bụ nke mbụ gbakwunyere n'ókè nke iji a desktọọpụ Ntụgharị. Nke abụọ na otu ga-abụ ebe i nwere ike tọghata gị faịlụ na batches kama otu otu ruo 30 ugboro ngwa ngwa nakwa na ZERO àgwà ọnwụ.
Na n'elu nke, ị nwekwara ike idezi gị faịlụ tupu akakabarede. Karịsịa na Wondershare Video Ntụgharị Ultimate, ị nwere ike mfe na conveniently dezie gị faịlụ na wuru na-edezi atụmatụ.
Nzọụkwụ na-nzọụkwụ ntụziaka:
Bulite gị MP4 faịlụ (+ Tinye Files ma ọ bụ dọrọ-na-dobe),
Pịa Dezie maka inwekwu edezi ọrụ, ma ọ bụ
Pịa Ntọala maka ukpụhọde gị faịlụ,
Nhọrọ 1: tọghata otu MP4 File Kpọmkwem (ma ọ bụ dezie tupu)
Conveniently ịdọrọ-na-dobe gị video faịlụ jidesie usoro ihe omume;
Alternatively, bulite ya si gị Obodo nchekwa ma ọ bụ idetuo na mado video si URL;
Pịa na Dezie bụrụ na ị chọrọ ịrụ ụfọdụ edezi na gị videos tupu akakabarede; ma ọ bụ
Ntọala bụrụ na ị chọrọ ka ịhazie video si ntọala dị otú ahụ dị ka mkpebi, etiti ọnụego, bit ọnụego na wdg
Nke ahụ bụ nke mbụ gbakwunyere n'ókè nke na iji Video Converter Ultimate dị ka ya wuru na-na isi edezi atụmatụ. Na mgbakwunye na, ị nwekwara ike tọghata gị vidiyo na batches na ruo ugboro 30 ngwa ngwa na ZERO àgwà ọnwụ.
Nhọrọ 2: Atọrọ nke mmepụta Formats (na nke kacha mma ntọala)
Ị ga-enwe obi ụtọ nwere nso nke presets dị paired na nke kacha mma ntọala maka gị MP4 faịlụ. Ugbu a ị na-adịghị na-ala n'iyi oge na-achọ n'ime na-atụ aro ma ọ bụ ihe kasị mma maka gị faịlụ na kama kpọmkwem tọghata gị faịlụ dabeere na ọkacha mmasị, ụdị ngwaọrụ ma ọ bụ wdg
Nhọrọ 3: Download Online na tọghata
Biko rụtụ aka na isiokwu na-esi Download Online Videos ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ibudata online.
Ịnyagharịa ka Download taabụ,
Idetuo na mado URL site na ihe nchọgharị ma ọ bụ pịa + Tinye URL,
Ozugbo download completes, na-aga Emechara (na n'aka ekpe menu) wee pịa na obere aka mgbodo ma tọghata gị faịlụ ma ọ bụ gbaa ya jidesie a DVD.
Rịba ama: Tinyegharịa Option 1 ozugbo ị dechara gị download.
Na-atụ aro Video Formats N'ihi Nokia Lumia 900
20 Best Online Video eso
Olee otú Play Flash on Nexus 10